မိခင်နို့တိုက်ကျွေးတဲ့ မေမေတို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် (၁၃)မျိုး - Lifestyle Myanmar
မိခင်နို့တိုက်ကျွေးတဲ့ မေမေတို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် (၁၃)မျိုး
ကျန်းမာရေးဟာ မိခင်နို့ကနေ ကလေးဆီကို စီးဆင်းပါတယ်။ မေမေတို့စားလိုက်တဲ့ အစားအစာထဲက အာဟာရတွေဟာ မေမေတို့အတွက်သာမဟုတ်ပါဘူး၊ မေမေ့ကလေးအတွက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးတဲ့အခါ ဘေဘီလေးဟာ မေမေရဲ့ မိခင်နို့မှတဆင့် သူတို့နေ့စဉ် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်တွေ ရရှိပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ နို့တိုက်ကျွေးနေတဲ့ မေမေတို့အတွက် စားသုံးရမယ့် ဗီတာမင်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အကြံပြုချက်တစ်ချို့ကို မျှဝေပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဘေဘီလေးအတွက် ဗီတာမင်က ဘာ့ကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ?
ဗီတာမင်တွေက ဘေဘီလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရေးပါပြီး နေ့စဉ်အာဟာရလိုအပ်ချက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်တွေမရှိရင် ကလေးဟာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မိုင်တိုင်တွေကို နှောင့်နှေးနိုင်ပြီး သူ့ရဲ့ကြီးထွားမှုကို တန့်သွားနိုင်တဲ့ ချို့တဲ့ရောဂါအန္တရာယ်တွေ ကျရောက်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးပထမလအနည်းငယ်အတွင်းမှာ မိခင်နို့ဟာ ဗီတာမင်တွေရဲ့ အရင်းအမြစ်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၆လကြာလို့ ကလေးလေးကို အစာမာစတင်ကျွေးချိန်မှာတောင် မိခင်နို့ဟာ ဗီတာမင်ရဲ့ အရင်းအမြစ်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ဆဲပါ။
မိခင်နို့စို့နေတဲ့ မွေးကင်းစကလေးမှာ ဘာဗီတာမင်တွေ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသလဲ?
ဗီတာမင်အားလုံးဟာ မွေးကင်းစကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာစွာ ကြီးထွားမှုမှာ အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါတယ်၊ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ဇယားကတော့ နို့တိုက်မိခင်တွေ နေ့စဉ်စားသုံးရမယ့် ဗီတာမင်တစ်ခုစီရဲ့ အစားအစာအရင်းအမြစ်စာရင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ဗီတာမင် A
ဗီတာမင် A ဟာ အမြင်အာရုံဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရေးပါပါတယ်။
အသားအရေနှင့် ဆံပင်အပါအဝင် တစ်ရှူးတွေရဲ့ ကျန်းမာစွာ ဖွဲ့စည်းမှုမှာ အကူအညီပေးပါတယ်။
နာမကျန်းမှုအတော်များများကို ဆန့်ကျင်ကာကွယ်မှုမှာ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ် ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။
၂။ ဗီတာမင် B1 (Thiamin)
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆဲလ်တွေဟာ စွမ်းအင်ရဲ့ အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုရတာကြောင့် ဗီတာမင် B1 ဟာ adenosine triphosphate (ATP) လို့ခေါ်တဲ့ ကွန်ပေါင်းဖွဲ့စည်းမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
ဆဲလ်တွေရဲ့ ကိုယ်တွင်းဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် အတော်များများဟာ ဗီတာမင် B1 ပေါ်မှာ မှုတည်ပါတယ်။
မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် သိမြင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက် တာဝန်ယူပေးရတဲ့ ဉီးနှောက်အာရုံကြောတွေ ကျန်းမာစွာ ဖွဲ့စည်းခြင်းမှာ အကူအညီပေးပါတယ်။
၃။ ဗီတာမင် B12 (Cobalamin)
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အုတ်မြစ်တည်ဆောက်ခြင်းတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ပရိုတိန်းအသစ်တွေ ဖွဲ့စည်းခြင်းမှာ အကူအညီပေးပါတယ်။ ဒီပရိုတိန်းဟာ ကလေးတွေကြီးထွားမှုအတွက် ကူညီပေးပါတယ်။
(အာရုံခံ) အာရုံကြောဆဲလ်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေး ကောင်းဖို့အတွက် အရေးပါပါတယ်။ အာရုံကြောဆဲလ်တွေ ကျန်းမာစွာ အသိအမြင်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းမှာ ကူညီပေးပါတယ်။
ဗီတာမင် B12 ဟာ ဆဲလ်တွေရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ DNA နှင့် RNA ဖွဲ့စည်းခြင်းမှာ မရှိမဖြစ် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါတယ်။
၄။ ဗီတာမင် B2( Riboflavin)
Riboflavinဟာ ခန္ဓာကိုယ် သံဓါတ် စုပ်ယူခြင်းမှာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါတယ်၊ ဗီတာမင် B2 စားသုံးမှုက မွေးကင်းစကလေးတွေကို ဟေမိုဂလိုဘင်အဆင့် အကောင်းဆုံး ထိန်းသိမ်းခြင်းမှာ အကူအညီပေးပါတယ်။
Vitamin B2 က ဆဲလ်များပျက်စီးမှုကနေ တားဆီးပေး (သို့ )လျော့ချပေးတဲ့ အင်တီအောက်ဆီဒင့်တစ်ခုအဖြစ် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Vitamin B2က မွေးကင်းစကလေးတွေမှာ သွေးအားနည်းခြင်းရဲ့ အခွင့်အလမ်းကို လျော့ကျအောင် ကူညီပေးနိုင်တဲ့ သွေးနီဆဲလ်တွေ ကျန်းမာစွာ ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အရေးပါပါတယ်။
၅။ ဗီတာမင် B3(Niacin)
ဗီတာမင် B3 ဟာ အာရုံကြောစနစ်ကို ကျန်းမာစွာ ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
နိုင်ယာဆင်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ စိတ်ဖိစီးမှုကို ထုတ်လွှင့်တဲ့ တခြားဟော်မုန်းများနှင့် ကျောက်ကပ်အနီးရှိ အာဒရီနယ် ဂလင်း ကဲ့သို့ မတူညီတဲ့ ဂလင်းတွေ ထုတ်လုပ်မှုမှာ အကူအညီပေးပါတယ်။
ဗီတာမင် B3က ရောင်ရမ်းမှု လျော့ကျအောင် ကူညီပေးပါတယ်။
၆။ ဗီတာမင် B5 (Pantothenic Acid)
Pantothenic acid ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ မတူညီတဲ့ ဂလင်းတွေနဲ့ သွေးနီဆဲလ်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးတို့အတွက် အရေးပါပါတယ်။
အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစွာ စောင့်ရှောက်ပေးသလို ခန္ဓာကိုယ်ကို အထူးသဖြင့် riboflavin ဗီတာမင်တွေ အသုံးပြုဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
ဗီတာမင် B5က အထူးသဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသထားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး အနာမြန်မြန်ကျက်စေအောင် ကူညီပေးပါတယ်။
၇။ ဗီတာမင် B6 (Pyridoxine)
ဗီတာမင် B6 ဟာ ဉီးနှောက်နှင့် ကျောရိုးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါပါတယ်။
ဗီတာမင် B6 ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အိပ်စက်ခြင်းနှင့် နိုးထခြင်းသံသရာကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ မက်လတိုနင်ဟော်မုန်းရဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းမှာ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်ပါတယ်။
၈။ ဗီတာမင် B9 (Folic Acid/Folate)
DNA နှင့် RNA ဖွဲ့စည်းမှုကို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။၎င်းက ဆဲလ်များကို ပိုမိုမြန်ဆန်များပြားအောင် ကူညီပေးပါတယ်။
ကလေးတွေရဲ့ ဉီးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ကူညီပေးပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်က သံဓါတ်စုပ်ယူမှုနှင့် သွေးနီဆဲလ်များ ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်လည်း အရေးပါပါတယ်။
၉။ဗီတာမင် C (Ascorbic Acid)
ဆံပင်၊ အသားအရေ နှင့် သွေးကြောများ ဖွဲ့စည်းရန် အသုံးပြုသော ပရိုတိန်း၊ ကော်လာဂျင်ဖွဲ့စည်းခြင်းမှာ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်ပါတယ်။
ဗီတာမင် C ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဆဲလ်များကို ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အနာကျက်စေခြင်းအတွက် အရေးပါပါတယ်။
သွေးဖြူဆဲလ်များဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှ ရောဂါပိုးများကို ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာကြောင့် ဗီတာမင်စီက leukocytes ထုတ်လုပ်ခြင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးတယ်လို့ ပြသထားပါတယ်။
၁၀။ ဗီတာမင် D
vitamin D2 သို့ vitamin D3ကနေ ဗီတာမင် ဒီကို အသည်းက ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ဗီတာမင် D3 ဟာ သဘာဝအားဖြင့် နေရောင်နှင့် ထိတွေ့တဲ့အခါ အရေပြားက ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် D2 ကို yeastကနေ ပြုလုပ်ပါတယ်။
ဗီတာမင်ဒီဟာ အရိုးတွေကို ကယ်လစီယမ်နှင့် မဂ္ဂနီဆီယမ် စုပ်ယူခြင်းမှတဆင့် ပိုပြီးမာကျောလာအောင် ပြုလုပ်ပေးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါတယ်။ ကလေးတွေ အရိုးသန်မာအားကောင်းလာဖို့အတွက ဗီတာမင်ဒီက အရေးပါပါတယ်။
ရောဂါပိုးတွေကို ဆန့်ကျင့်ကာကွယ်ပေးတဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ဆဲလ်များရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းမှာ ကူညီပေးပါတယ်။ ဗီတာမင်ဒီကို ဖျော်ရည်၊ စီရီရယ်၊ ပေါင်မုန့်နှင့်နို့ကဲ့သို့သော အစားအစာအတော်များများမှာ ခံတပ်တစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဗီတာမင်ဒီကို ဖြည့်စွက်စာများကနေလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၁၁။ ဗီတာမင် E
ဗီတာမင် အီးက ကြွက်သားတွေ ကျန်းမာစေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ cell-mediated ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို အားကောင်းစေပြီး ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကိုလည်း တိုက်ဖျက်ပေးပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ သွေးနီဆဲလ်တွေ ကျန်းမာနေစေဖို့ ဗီတာမင် အီးလိုအပ်ပါတယ်။
၁၂။ ဗီတာမင် H(ဗီတာမင် B7လို့လည်း လူသိများပါတယ်) Biotin
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆီ၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေဟာ ဇီဝကမ္မမျှတစေဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအာဟာရတွေက ခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ကြီးထွားမှုကို ကူညီပေးပါတယ်။
မွေးကင်းစကလေးတွေမှာ အသားအရေကျန်းမာဖို့အတွက် ဗီတာမင် H လိုအပ်ပါတယ်။ Biotin ဟာ အရေပြား၊ ဆံပင်နှင့် လက်သည်း ကျန်းမာရေး အလုံးစုံ ကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် အလွန်အရေးပါပါတယ်။
၁၃။ ဗီတာမင် K
သွေးခဲမှုကို ကူညီပေးပါတယ်၊ အရိုးကျန်းမာရေးနှင့် အရိုးသိပ်သည်းဆအတွက် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်ပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်နှင့် သွေးကြောကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းစေပါတယ်။
ကျန်းမာပြီး မျှတတဲ့ အစားအစာများ စားသုံးခြင်းက သင့်ရဲ့နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်တွေကို ရရှိဖို့ သေချာပါတယ်။
မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေကို ဘယ်လိုပြုမှုရမယ်၊ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ဘယ်လိုစီမံရမယ်ဆိုတာကို သင်ပေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးငယ်တွေဆီကနေ ကျွန်မတို့ သင်ယူနိုင်တဲ့အရာတွေကော စဉ်းစားဖူးပါသလား? ဟုတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ ကျွန်မတို့အတွက် မိမိကိုယ်ကို ချိတ်ဆက်မှုကောင်းအောင် ကူညီပေးနိုင်တဲ့ အရမ်းကောင်းမွန်သော ဆရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။...